static kuongorora vs simba rekuongorora musoftware kuyedza
Kuru Qa Static Kuongorora vs Dynamic Kuongorora muSoftware Kwayedza
Chii chinonzi Static Kuongorora?
Kuongorora kwakasimba kunosanganisira hapana kuuraya kwakasimba kwesoftware iri pasi pekuyedzwa uye kunogona kuona zvinokanganisa padanho rekutanga, usati wamhanya chirongwa ichi.
Kuongorora kwakasimba kunoitwa mushure mekukodha uye usati waita zviyero zveyuniti.
Kuongorora kwakasimba kunogona kuitwa nemuchina kuti 'ufambe nepakati' kodhi yekodhi uye uone mitemo isingateedzere. Muenzaniso wekare ndeye compiler iyo inowana lexical, syntactic uye kunyange mamwe semantic zvikanganiso.
Kuongorora kwakasimba kunogona kuitwawo nemunhu anozoongorora kodhi iyi kuona kuti zviyero zvakakodzera uye nekonisheni zvinoshandiswa kuvaka chirongwa ichi. Izvi zvinowanzozodaidzwa kuti Kodhi Yekuongorora uye zvinoitwa neanogadzira vezera, mumwe munhu asiri iye anovandudza uyo akanyora kodhi.
Kuongorora kwakasimba kunoshandiswa zvakare kumanikidza vagadziri kuti vasashandise zvine njodzi kana ngoro zvikamu zvemutauro wechirongwa nekumisikidza mitemo isingafanirwe kushandiswa.
Kana vagadziri vachiita kodhi yekuongorora, ivo vanowanzo tsvaga
Nhamba yekufona kwebasa
Unogona zvakare kuongorora yuniti bvunzo
Hunhu hunhu hunogona kuve iko kwekutarisa kweiyo static ongororo:
Ndeapi mabhenefiti eStatic Analysis?
Mukana mukuru weiyo static ongororo ndeyekuti inowana nyaya neiyo kodhi isati yagadzirira kusangana uye kuenderera kuyedza.
Static kodhi yekuongorora bhenefiti:
Inogona kuwana kushaya simba mukodhi panzvimbo chaiyo.
Iyo inogona kuitiswa nevakadzidziswa software vimbiso vanogadzira vanonyatsonzwisisa kodhi.
Kodhi kodhi inogona kunzwisiswa zviri nyore nevamwe kana vanogadzira ramangwana
Iyo inobvumira inokurumidza kutendeuka kuti igadzirise
Kushaya simba kunowanikwa pakutanga muhupenyu hwekusimudzira, zvichideredza mutengo wekugadzirisa.
Zvishoma kuremara mune yekupedzisira bvunzo
Kwakakanganiswa zvakasarudzika izvo zvisingakwanise kana zvisingawanzo kuwanikwa uchishandisa simba bvunzo
Kushandisa kwakasiyana (kusashevedzwa, kusashandiswa)
Boundary kukosha kutyorwa
Static kodhi yekuongorora kushomeka:
Inguva inopedza kana ichiitwa nemaoko.
Zvishandiso zvakagadzirwa zvinoburitsa manyepo enhema uye zvisizvo zvenhema.
Iko hakuna kukwana kwakadzidziswa vashandi kuti vanyatsoitisa static kodhi kuongorora.
Zvekushandisa zvishandiso zvinogona kupa pfungwa yenhema yekuchengetedza kuti zvese zviri kugadziriswa.
Zvishandiso zvishandiso zvakangonaka chete semitemo yavari kushandisa kuongorora nayo.
Izvo hazviwane kusagadzikana kwakaunzwa munzvimbo yekumhanya nguva.
Chii chinonzi Dynamic Analysis?
Kupesana neStatic Analysis, uko kodhi isingaitwe, simba rekuongorora rinoenderana ne kuuraya system , kazhinji tichishandisa maturusi.
Kubva kuWikipedia tsananguro yesimba rekuongorora chirongwa :
Dynamic chirongwa chekuongorora ndiko kuongorora kwecomputer software inoitwa pamwe nekuitisa zvirongwa zvakavakwa kubva kune iyo software pane chaicho kana chaicho processor (ongororo inoitwa pasina kuuraya zvirongwa inozivikanwa seiyo static kodhi ongororo). Dynamic chirongwa chekuongorora maturusi angangoda kurodha emaraibhurari akasarudzika kana kunyangwe kudzoreredza kodhi yechirongwa.
Iyo yakajairika simba rekuongorora maitiro ndeyekuita Yuniti Tests ichipesana nekodhi kuti uwane chero kukanganisa mune kodhi.
Dynamic kodhi kuongorora zvakanaka:
Iyo inoratidza kusasimba munzvimbo yekumhanya.
Iyo inobvumidza kuongororwa kwekushandisa uko iwe usingakwanise kuwana iyo chaiyo kodhi.
Inotaridza kusagadzikana kunogona kunge kuri nhema nhema mune yakamira kodhi kuongorora.
Iyo inobvumidza iwe kuti usimbise static kodhi kuongorora kuongororwa.
Inogona kuitiswa ichipesana nechero kunyorera.
Dynamic kodhi kuongorora kusakwana.
Zvekushandisa zvishandiso zvinopa pfungwa yenhema yekuchengetedza kuti zvese zviri kugadziriswa.
Haugone kuvimbisa yakazara bvunzo kufukidza kweiyo sosi kodhi
Izvo zvinonyanya kuomarara kutsvaga kusagadzikana kudzokera kunzvimbo chaiyo mukodhi, kutora nguva yakareba kugadzirisa dambudziko.
Runyerekupe Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 inoiswa mabhenji, akajekeswa
Pasina waya kuchaja yako Samsung Galaxy Cherechedzo 3 neiyo nyowani S-View flip kavha
Motorola Moto G 5G Kuongorora
AT & T inoburitsa Galaxy S7 yekuvandudza iyo inowedzera June chengetedzo chigamba, Knox uye Messaging fixes
Ino ndiyo yako yekupedzisira mukana kurodha pasi ako ese maVini